नेता र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	नेता र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ ! » Nepal Fusion
नेता र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ !
साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले शीर्ष नेता र उच्च तहका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचारको जड शीर्ष नेता र उच्च तहका कर्मचारी नै भएको दाबी गर्दै उनले ०४६ सालयता सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाहरुको सम्पत्ति छानबिनको माग गरेका हुन् ।
आइतबार बुटवलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै संयोजक मिश्रले भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्न ०४६ सालयता राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो भने पहिलो क्याबिनेटबाट यो निर्णय गर्छौं । उनले राजनीतिक दलका भ्राृत संगठनहरु पनि भंग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।